Ny DIY tsara indrindra ho an'ny biby fiompy - Ikkaro
Raha olona mahay ianao dia tianao DIY na tianao ny manao zavatra amin'ny tananao ary mitady hanamboatra kojakoja ho an'ny biby fiompinao ianao. Izahay dia mamela anao lisitra DIY izay ahafahanao manamboatra zavatra tsy mampino sy mora vidy ho an'ny biby, na vorona, alika, saka, trondro, akoho na biby hafa.
Izahay dia mihevitra tetik'asa maro toy ny mpizara sakafo izay azo ampiasaina amin'ny saka, alika, akoho, sns. Famoronana sy fivoriambe ary aquarium ary ny faritra ao aminy, sns.
Ary zavatra tena mahaliana, tsy ny famoronana ihany fa ny fanovana sy ny fanapahana zavatra izay efa tokony hanomezantsika fiainana faharoa na hahatonga azy ireo ho ilaina kokoa sy hanitsy ny filan'ny biby fiompintsika.
Todo ny tontolon'ny DIY, miaraka amin'ny fitaovany sy ny tetika ampiasana amin'ny biby fiompinay. Miezaka foana izahay fa afaka mamerina manamboatra zavatra isan'andro. Jereo izay ananantsika.
Raha vantany vao miroborobo ny fizarana, dia hanisy marika sy hanasokajiana ireo fampianarana izahay amin'ny alàlan'ny biby fiompy (alika, saka, vorona, trondro, akoho) ary isan-karazany (mpihinana, kilalao, sns.). Raha sendra sarotra aminao ny manasokajy azy. sivana mahaliana, lazao aho fa homeko lanja izany.
Ahoana ny fomba hanaovana kodiarana hamster amin'ny kapila mafy
Eto isika dia manana fomba hafa araraoty ny kapila mangatsiaka taloha, manao aminy kodiarana ho an'ny hamsters. Ny hevitr'ity kodiarana hamster "teknolojia" ity dia ny hanaovana azy hangina araka izay tratra mba tsy hanelingelina antsika ny tabataban'ilay hamster mihazakazaka ao anatiny.
Raha tianao izany mividy kodiarana hamster mangina ao amin'ny fivarotana biby fiompinao ho hitanao fa lafo be izy ireo. Amin'ity hack ity dia azonao atao ny mihazakazaka amin'ny haingam-pandeha ny hamster nefa tsy mitabataba.
Mila kapila matevina isika, izay hamoahana ny motera.
Mpihinana vorona namboarina
Volana vitsivitsy lasa izay dia namoaka lahatsoratra momba ny ny fomba fanaovana sakafom-borona homemade.
Androany dia mitondra maodely fanampiny izahay hahazoanao hevitra ...
Fomba fanamboarana mpamorona vorona zaridaina namboarina
Eto ny lohataona ary feno saha, zaridaina sy tanàna feno vorona manomboka ny vanim-potoana fiompiana.
Raha manana zaridaina ianao, na toerana somary ahatongavan'ireo vorona, dia azonay atao ny manamboatra ity feeder mora indrindra ity miaraka amin'ny takelaka Ikea vitsivitsy.
Ny mahasamihafa an'ity mpamatsy ity sy ny hafa azontsika atao amin'ny fitaovana hafa dia izy fa manana glamor kely kokoa noho ireo vita tamin'ny tavoahangy plastika.
Ny fitaovana ilaintsika dia aseho amin'ity sary manaraka ity, vitsy dia vitsy izy ireo ary mora vidy tokoa.
Ahoana ny fomba fananganana mpamorona CO2 an-trano ho an'ny aquarium
Ho an'ireo rehetra manana na mieritreritra ny hanangana aquarium, azoko antoka fa hahasoa ity fampahalalana ity--)
Momba izany ny fomba fanamboarana mpamorona CO2 an-trano ho an'ny aquarium.
Ny mpitrandraka CO2 dia ampiasaina mba hanafainganana ny fotosintesisan'ny zavamaniry, hahatonga azy ireo hitombo sy hamokatra haingana, ary miaraka amin'izay dia ampiasaina ho toy ny reducer PH.
Ho an'ny famoronana CO2 mihitsy, ny siramamy, ny masirasira voajanahary (masirasiran'ny mpanjaka no tsy ampirisihina satria misy singa simika vitsivitsy) sy rano voadio.
Ny fanohanana dia vita amin'ny tavoahangy Coca-Cola.